12 Askari Oo Ku Dhintay Dagaallo Ka Socda Gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Monday May 14, 2018 - 11:06:07 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanno katirsan gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee bartamaha Soomaaliya.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii ciidamada Xarakada Al Shabaab ay howlgal burcad sifeyn ah ka bilaabeen deegaanno kala qeybiyo Sh/dhexe iyo Hiiraan waxaana howlgalkaas lagu kala eryay maleeshiyaad katirsanaa dowladda Federaalka oo isbaarooyin udhiganayay gaadiidka dadweynaha.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaallo culus oo shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Xalfooley iyo Jalalaqsi ay sababeen dhimashada 5 askari oo katirsanaa ciidamada DF-ka kuwaas oo taageera ka helaya Taliska ciidamada Jabuuti.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa qeyb ka noqday guluf dagaleedka socda, boqolaal katirsan ciidamada Itoobiya oo kasoo dhaqaaqay degmada Maxaas ayaa gaaray Moqakori si ay ugacan siiyaan maleeshiyaadka Mooryaanta DF-ka kuwaas oo baacsi daran kala kulmaya Shabaabul Mujaahidiin.
inkastoo Ciidamada Itoobiya aysan wali dagaalka si toos ah ugu biirin hadane waxay geed fadhi u yihiin maleeshiyaadka oo ay siinayaan rasaasta islamarkaana ay udaweynayaan dhaawacyada.
Dad ku sugan gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayaan daryanka madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayo, warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in dagaallada socda lagu dilay in kabadan 12 askari tan iyo sabtidii lasoo dhaafay.
Maleeshiyaadka DF-ka ayaa goobta dagaalka uga tagay Meydadka 8 askari halka 4 meyd ay geyeen degmada Jalalaqsi, Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab Afhayeenka ciidamada Al Shabaab ayaa sheegay in ay tallaab adag ka qaadayaan maleeshiyaadka Itoobiyaanku soo hubeeyeen ee Kufsiga iyo dhaca ka geysanaya deegaannada kala qeybiya labada gobol.